वितेका ३ बर्ष : के भए सोलुदुधकुण्डमा ? - Himal News Express
वितेका ३ बर्ष : के भए सोलुदुधकुण्डमा ?
दिपेन्द्र पराजुली ५ चैत्र २०७७, बिहीबार १०:१८ 1355 पटक हेरिएको
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको एक मात्र नगरपालिका सोलुदुधुकण्डले जनप्रतिनिधि पाएको ३ बर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा नगर क्षेत्रमा के कस्ता विकास र निर्माणका काम भए ? सम्बृद्धिको यात्रा कसरी अघि बढिरहेको छ । यीनै विषयमा सहकर्मी दिपेन्द्र पराजुलीले मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पा संग गर्नुभएको कुराकानीको संपादिन अंश :
जिल्लाकै एक मात्र नगरपालिका के गर्दै छ ?
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका हामीले निर्वाचन ताका गरेका प्रतिबद्धता, घोषणा–पत्र र नगरबासीको चाहाना अनुसार तिब्र गतिमा विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ । साथै, नगरपालिकाले आफ्नो संस्थागत विकास सँगसगै नगरपालिकाकोे तर्फबाट नगरबासीलाई सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्दै नगरभित्र हुने सम्पुर्ण विकास निर्माणको क्रियाकलापमा शुसासन र पारदर्शिता कायम गरि सम्पुर्ण नगरबासीलाई स्थानिय सरकारको महसुस दिलाउने गरि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।
स्थानिय तहको पहिलो जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दा नगरपालिका सञ्चालनमा के कस्ता समस्या देखिए ?
लामो समय पश्चात देशमा संघिय संरचना अनुसार स्थानिय तहको गठन भएको हुनाले संघियताको मर्म अनुसार स्थानिय तह सञ्चालन गर्न ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधिको अभाव, कर्मचारीको व्यवस्थापन ढिला सुस्ती र अस्तव्यस्त हुनु, कर्मचारी जनप्रतिनिधिको मातहतमा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास नहुँदा धेरै समस्या झेल्नुप¥यो । त्यस माथि संघ र प्रदेशमा फरक दलको सरकार गठन भएको हुँदा र जिल्लाबाट प्रदेश र संघमा निर्वाचित ठुला जनप्रतिनिधिमा परिपक्व राजनितिक संस्कारको विकास नभएकाले समन्वय र सहकार्यमा थप जटिलता बेहोर्नुप¥यो ।
हालसम्म नगरबासीले अनुभुति गर्ने काम के–के भएका छन् ?
हरेक क्षेत्रमा उल्लेखेनिय काम हुनुका साथै महत्वपुर्ण विकासको उपलब्धि हासिल भएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रत्येक वडाको प्रत्येक टोलमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सल्लेरी नयाँबजार क्षेत्र भित्रको मुख्य सडकको स्तरउन्नतीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वडा नम्बर ४ फाप्लु– वडा नम्बर ५ सल्लेरी र वडा न्म्बर ६ दोर्पु क्षेत्रको चुनौतिको रुपमा रहेको ढललाई व्यवस्थापन गर्न संघिय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय मार्फत नेपालकै पहिलो पटक पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितकोे ढल व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाईएको छ । सडकको पहूँच पुगेका टोलमा सहज यातायात सञ्चालनका लागि विभिन्न खोलामा हाल सम्म ४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न सफल भएका छौ । भने अहिले ४ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । नगरपालिकाले साना ठुला ३ वटा झोलुङगे तथा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गरेको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाबासीले लामो समयदेखि खेप्नु परेको विद्युत अभावको समस्यालाई समाधान गर्दै उज्यालो नगर बनाउने अभियानका साथ प्रत्येक टोलमा विद्युतिकरणको कामलाई तिब्रता दिईएको छ । बर्षैादेखि सल्लेरी क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङको समस्यालाई हल गर्न सफल भएका छौ ।
हाल राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन मार्फत वडा नम्बर ११ तिङलामा ९० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत बाल्न सफल भएका छौँ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ केरुङ, ९ गोराखानी र १० टाप्टीङ क्षेत्रमा आगामी असार मसान्त भित्र विद्युत बाल्ने गरि ग्रामिण विद्युतिकरणको कामलाई तिब्रता दिइएको छ । विद्युतिकरणकै सवालमा लामो समयदेखि अलपत्र बनेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका २ स्थित अप्पर जुनबेसी हाईड्रोपावरको काम सुचारु गराउनका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नगरपालिका बिच सम्झौता गरि काम सुरु गरेका छौँ । नगरपालिकाको मुख्य मुख्यबजार क्षेत्रमा दुर्घटना जोखिम कम गर्नका साथै आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि सडक बत्ति र सिसि क्यामेरा जडान गरिएको छ । नागरिकले सञ्चारमा खेप्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिको हरेक क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टेलिफोन नेटवर्क र फोर जि ईन्टरनेट सेवा सुविधा पु¥याउने काम भएको छ । त्यसैगरि सञ्चार सुविधालाई अझ सहज, सरल, प्रभावकारी र दिगो बनाउन नगरपालिकाको नेतृत्वको पहलमा ओखलढुंगा देखि पत्ताले हुँदै सल्लेरी–फाप्लु–टाक्सिन्दुको टावरसम्म अप्टिकल फाईबर बिच्छ्याउने काम तिब्र गतिमा अघि बढेको छ ।
हाल राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन मार्फत वडा नम्बर ११ तिङलामा ९० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत बाल्न सफल भएका छौँ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ केरुङ, ९ गोराखानी र १० टाप्टीङ क्षेत्रमा आगामी असार मसान्त भित्र विद्युत बाल्ने गरि ग्रामिण विद्युतिकरणको कामलाई तिब्रता दिइएको छ । विद्युतिकरणकै सवालमा लामो समयदेखि अलपत्र बनेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका २ स्थित अप्पर जुनबेसी हाईड्रोपावरको काम सुचारु गराउनका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नगरपालिका बिच सम्झौता गरि काम सुरु गरेका छौँ । नगरपालिकाको मुख्य मुख्यबजार क्षेत्रमा दुर्घटना जोखिम कम गर्नका साथै आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि सडक बत्ति र सिसि क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा जिल्ला अस्पताल फाप्लुको भवन अत्यन्तै जिर्ण बन्दै गएपछि नगरपालिकाको पहलमा ३० शैयाको भविष्यमा ५० शैयाको रुपमा विस्तार गर्न मिल्ने गरि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरि नगरपालिकाको पहलमा वडा नम्बर ८ केरुङ र वडा नम्बर १ नुनथला टाक्सिन्दुमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिएको छ । साथै स्वास्थ्यको पहूँच बृद्धिका लागि नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ६ र १० मा आधारभुत सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरिएको छ । नगरपालिकाको प्राय सबै क्षेत्रमा नगरबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि साना ठुला खानेपानी योजना सञ्चालन भईरहेका छन् । अहिले नगरपालिकाको फाप्लु–सल्लेरी–दोर्पु सम्मको खानेपानी योजना कार्यन्वयनका लागि संघिय सरकार खानेपानी मन्त्रालयमा पहल भईरहेको छ । जिल्लाको तल्लो क्षेत्रको मुख्य विमानस्थल मानिएको फाप्लु विमानस्थलमा हुने उडान अवतरणलाई अझ सुरक्षित बनाउन निर्माणस्थलको घेराबार पार्किङस्थल निर्माण लगायतको स्तरउन्नती नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न भएको छ । शिक्षा तर्फ २०७२ सालको भुकम्पले क्षति पु¥याएको १७ भन्दा बढि विद्यालयका संरचना पुर्नर्निमाणको काम सम्पन्न भएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो भुगोल भएको नगरपालिकाको समस्या के छन् ?
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै ठुलो छ । र यहाँका बस्तिहरु छरिएर रहेको हुनाले हरेक बस्तिमा विकासको पुर्वाधारहरु पु¥याउन र नगरले उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य प्रशासनिक सुविधा पु¥याउन समेत नगरपालिकाका लागि चुनौतिपुर्ण रहेको छ । यहाँका बहुसंख्यक नगरबासीहरु कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न रहेको हुनाले एकिकृत बस्तिको विकास गर्न समेत अव्यवहारिक देखिन्छ ।
ती समस्या समाधानका लागि तपाईको प्रयास के रहयो ? साथै प्रदेश र संघिय सरकारबाट कस्तो सहयोग पाउनुभयो ?
नगर क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मैले आवश्यक पहल गरिरहेको छु । नगरपालिकाको सिमित स्रोत साधनलाई पारदर्शीर प्रभावकारी ढंगले नगरपालिका र नगरबासीको हितमा परिचालन गरि अधितकम भन्दा अधिकतम विकासको प्रतिफल हासिल गरि त्यसको लाभ नगरबासीलाई दिलाउन मैले प्रयास गरिरहेको छु । संघ र प्रदेश सरकार सँग समेत समन्वय र सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको छु । किनभने नगरपालिकाको स्रोत साधनले मात्रै गरेको विकास निर्माण पुर्णता पाउन गाह्रो छ । तर यो कुरा संघ र प्रदेश सरकारले बुझ्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
त्यसमाथि ठुला सरकारले स्थानिय सरकारलार्ई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन । त्यसमा पनि फरक फरक दलबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानिय तहलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कुरामा पुर्वाग्राही भएको महसुस भएको छ । यो पुर्वाग्राही मानसिकतालाई प्रदेश र संघ सरकारले परिवर्तन गरी सबै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको साथ अघि बढेको खण्डमा मात्रै सबै खाले समस्याको समाधान हुनुका साथै दिगो विकासको लक्ष्य र समृद्धि हासिल गर्न सहज हुनेछ ।
निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता हाल सम्म कति पुरा भए ?
निर्वचनकाताका जनताका माझमा जादै गदा खेरी मैले त्यस्तो ठुलो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिईन । मैले जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए । मैले गरेको प्रतिबद्धताहरु कपोकल्पित नभई यथार्थपरक नै थिए । त्यसकारण मैले अघि उल्लेख गरेका कुराहरु हेर्दा धेरै कामहरु छोटो समयमा पुरा गर्न सफल भएको छु जस्तो लाग्छ । त्यसमा नगरबासी सन्तुष्ट हुनुहन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु । र बाँकी कार्यकालमा अझ थप केही गर्न सक्छु भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तपाईको ५ वर्ष कार्यकालमा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको स्वरुप कस्तो सोच्नु हुन्छ ?
मेरोे ५ वर्षे कार्यकालको अवधिमा प्रत्येक नगरबासीको घरघरमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुग्ने छ । प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत पुगेको हुने छ । विगतको जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा नागरिकले कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ रहने छैन । प्रत्येक टोलमा सडक सञ्जाल । जुन बाह्रै महिना सञ्चालन भई नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । प्रत्येक खोलामा मोटरेबल पुलको निर्माण भईसक्नेछ । सडक र मोटरेबल पुल अभावमा नागरिकले यातायातमा सास्ती खेप्नुपर्ने छैन । गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति हासिल गरेको हुनेछ । नेपाल सरकारको सहुलियत कर्जा प्रवाहमा उचित सहजिकरण गरि कृषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रमा उद्यमशिलताको क्षेत्रमा युवा स्वरोजगार सिर्जना हुनेछ ।
कोरोना महामारीका बिच के कस्ता काम गर्नुभयो ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरका कारणले संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नागरिकको जनजिवन अस्तव्यस्त भई समस्यामा फसेको समयमा नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको जिवन बचाउन महत्वपुर्ण कदम चालेको थियो । जसमा नगरपालिका मातहतमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री र उच्च जोखिम भत्ता प्रदान गरि भाईरसको संक्रमण फैलिन नदिन उनीहरुलाई फ्रन्टलाईनमा परिचालन गरि कोरोना भाईरस सम्बन्धि जनचेतना अभिबृद्धि गर्र्ने, थर्मल गन, मास्क र सेनिटाईजर वितरण गराउने काम गरियो ।
नगरपालिकाले उद्धार गरेका वा शंकास्पद लक्षण देखिएका नागरिकलाई राख्नका लागि व्यवस्थित क्वारेन्टीन सञ्चालन गरि सेवा उपलब्ध गरेको थियो । कोरोनाको लक्षण देखिएको विरामीको लागि उपचारका लागि कोभिड अस्पताल सम्म लैजाने र ल्याउने काम समेत निशुल्क गरियो । कोरोनाका कारण देश विदेशबाट रोजगारी गुमाई गाउँ फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने उदेश्यले नेपाल सरकारको सहुलियत कर्जा प्रवाह कार्याविधि अनुसार विभिन्न बैक सँग कर्जा प्रवाह सहजिकरणका लागि सम्झौता गरि उद्यमशिलताको विकास मार्फत स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको छ ।
तपाईको नगरपालिका भित्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता काम गर्नुभएको छ ?
पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकियस्थल ज्वालामाई देवीको मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि करिब १२ करोडको डिपिआर तयार गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छौ । त्यसका साथै पर्यटकिय क्षेत्र पत्तालेमा पर्यटन मन्त्रालय सँगको लागत साझेदारीमा ७ करोडको लगानी मार्फत पर्यटकिय पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नगरपालिकाको पर्यटकिय गन्तव्य पिके, दुधकुण्ड लगायतको क्षेत्रमा पर्यटकिय पदमार्ग निर्माणको काम जारी रहेको छ । सँगै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साईक्लिङ रुटको विकास गरि साईक्लिनिङ खेलको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रर्वद्धन गनै काम समेत भईरहेको छ ।
जनमूखि कांग्रेस बनाउन मेरो
प्रवासी नेपालीको लगानीले हामीलाई
टिम्बुरबोटे काण्डको ४८ बर्ष,
कांग्रेसको राजनितिमा होमिए लोकप्रिय
‘जनमैत्री कांग्रेस निर्माणको लागि
फाप्लु अस्पतालको जनशक्तिको माग
प्रधानन्यायधिशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ :